Kaominina any Frantsa
Kaominina ao Frantsa
Władysław Reymont dia mpanoratra, mpanao asa soratra, mpanoratra tantara lava mizaka ny zom-pireneni Polonia teraka ny 7 Mey 1867 ary maty ny 5 Desambra 1925 tao Varsôvia. Loka Nobel ao 1924.
Ny Kaonektiktioty, na Connecticut, dia faritany mizaka tena any Inglatera Vao, any avaratra atsinanan Etazonia, Ny isam-poniny dia misy 3.5 tapitrisa mahery. Ny renivohiny dia Hartford, ary ny tanàna ngeza indrindra dia Bridgeport. Any atsinanani ...
Ny Kansas dia faritany mizaka tena eo anivon etazoania. Nahazo anarana araka ny renirano Kansas mihampita azy ilay faritany. Ny renivohiny dia Topeka ary ny isam-poniny dia misy 2 802 000 eo ho eo taminny 2008. Ny endrika ara-jeografiani Kansas d ...
Ny Louisiana dia faritany mizaka-tena iray any Etazonia, ny renivohiny dia Bâton Rouge, misisina aminny renirano Mississipi. Ny tanàna tena ngeza indrindra any Louisiana dia New Orleans Ny Louisiana dia ilay faritra atsimo ny Frantsa Vao hatramin ...
I Illinois dia faritany mizaka tena iray eo aminny faritra afovoani Etazonia, manana fiantsoana hoe Midwest. Ny renivohiny dia Springfield. Io faritany mizaka tena amerikana io dia mizara sisintany amini Michigan, Wisconsin, Missouri, Kentucky ar ...
Ny New Hampshire dia firenena any atsinananny etazonia, ny renivohitra-ny dia Concord, ny tanàna ngeza indrindra any dia Manchester, misy 1.235.786 no mponina miaina any.
Ny New Mexico dia firenena any Etazonia, misy mponina 1.819.000 mahery any, ny renivohitra-ny dia Santa Fe, fa ny tanàna ngeza indrindra any dia Albuquerque. Manana velarana 315.194 km² ny New Mexico.
Ny Ohio dia firenena any Etazonia, ny renivohitra-ny dia Colombus, manana velarana na 116.096 km² ny Ohio, ary 11.353.140 no isa ny mponina miaina any, ny tanàna ngeza indrindra any dia Cleveland sy Colombus
I Apple Inc., izay nitondra ny anarana taloha hoe Apple Computer, Inc., dia orinasa amerikanina manana zanakorinasa erakizao tontolo izao izay manamboatra ary mivarotra entana elektrônika ho anny daholobe, solosaina ary rindrankajy. Ireo entana m ...
The Coca-Cola Company dia anisanny orinasa lehibe mivarotra zava-pisotro eto aminizao tontolo izao, ary anisanny orinasa amerikanina lehibe indrindra. Ny nampalaza io orinasa io dia ny zava-pisotro varotany: Coca-Cola. Izy io dia marika napetraka ...
Ny Pennsylvania dia firenena any etazonia, ny renivohitra-ny dia Harrisburg, fa ny tanàna ngeza indrindra dia Philadelphia. Misy mponina 12.281.054 miaina any.
Ny Rhode Island dia firenena any Etazonia, ny renivohitrany dia Providence, misy olona 1.048.319 no miaina any. Ny Rhode Island dia ilay firenena amerikana kely indrindra 3.144 km 2.
Ny Texas dia firenena eo antsimoni Etazonia, izy io dia ilay firenena ngeza indrindra eo arinani Alaska ary izy no firenena faha roa aminny isam-ponina. 80% ny olona miaina any Texas miaina anaty tanàna, ny antsasanio no miaina any Houston, San A ...
Washington dia faritany mizaka tena any avaratra andrefan Etazonia. Any avaratra izy voafaritry ny faritany kanadianinny Kolombia Britanika, voafaritry ny Idaho any atsinanana, ny Oregona any atsimo ary ny ranomasimbe Pasifika any andrefana. Aza ...
Port-au-Prince dia renivohitri Haiti ary tanàna be mponina indrindra any Hiti. Mety miisa 3.81 tapitrisa ny isam-ponina ao aminny tanànan-dehibe. Ny anaram-ponina dia Port-au-princianina na Port-au-Princien aminny fiteny frantsay. Any aminny sisi ...
﻿ I Toluca dia tanàna ao aminny faritanini Mexico State, ao aminny Meksika. Ny renivohiny dia Mexico State. Ny kaodim-paositrilay tanàna dia 50000-.
KFC Uerdingen 05 dia klioba baolina kitra matianina ao aminny Alemaina. Niorina taminny 1905 ny fikambanana. Ny ekipa dia efa nandray anjara taminny ligy voalohany tany Alemain. Ny ekipa aminizao fotoana izao dia milalao aminny ligy fahatelo any ...
﻿ Lufthansa dia orinasa zotram-piaramanidina lehibe indrindra aoAlemaina, ary faharoa lehibe indrindra ao Eoropa. Frankfurt am Main ary Munich no anisanny hub ani Lufthansa, Ny hub dia seranam-piaramanidina mba ahafahanireo mponina ho anireo mpon ...
La Réunion dia nosy frantsay 700km any atsinanani Madagasikara ary 170km any atsimo andrefani Maorisy, tany akaikiny indrindra. Ny renivohiny dia Saint-Denis.
Henri Becquerel dia mpahay fizika, injeniera mizaka ny zom-pireneni Frantsa teraka ny 15 Desambra 1852 tao Paris ary maty ny 25 Aogositra 1908 tao Le Croisic. ao 1903.
Irène Joliot-Curie dia mpahay fizika, mpahay siansa mizaka ny zom-pireneni Frantsa, Polonia teraka ny 12 Septambra 1897 tao Paris ary maty ny 17 Martsa 1956 tao Paris. Loka Nobel ao 1935.
Nea Salamis Famagusta FC dia klioba baolina kitra matianina ao Ammochostos ao aminny Repoblikani Kipra. Izy io dia klioba sesintany nanomboka taminny nanafihanny tiorka ani Kipra taminny 1974. Nifindra fonenana ho tao Larnaca ilay klioba. Ny faha ...
Jagiellonia Białystok dia klioba baolina kitra matianina ao Białystok ao aminny Polonia. Ny fahavitanny Jagiellonia Białystok misongadina indrindra dia ny fandresena tao aminny Kaopy Polonia ary ny Super Kaopy Poloney taminny 2010. Nifaninana tam ...
Aleksander Ścibor-Rylski dia talen-koronantsary, mpanoratra senariô, mpanao asa soratra mizaka ny zom-pireneni Polonia teraka ny 16 Martsa 1928 ary maty ny 3 Aprily 1983 tao Varsôvia
Jerzy Kawalerowicz dia talen-koronantsary, mpanoratra senariô, mpamoaka horonantsary mizaka ny zom-pireneni Polonia teraka ny 19 Janoary 1922 ary maty ny 27 Desambra 2007 tao Varsôvia
Marian Mazur dia mpahay siansa, injeniera, mpahay kajimirindra, mpahay fizika, mpanao asa soratra mizaka ny zom-pireneni Polonia tao Radom, teraka ny 7 Desambra 1909 ary maty ny 21 Janoary 1983 tao Varsôvia
Fryderyk Scherfke dia mpilalao baolina kitra mizaka ny zom-pireneni Alemaina, Polonia teraka ny 7 Septambra 1909 ary maty ny 15 Septambra 1983 tao Berlin
Alfred Nobel dia injeniera, mpamorona, mpiantoka mizaka ny zom-pireneni Soeda teraka ny 22 Oktobra 1833 tao Stockholm, ary maty ny 10 Desambra 1896 tao Sanremo.
Joany Paoly II
Karol Józef Wojtyła, teraka tao Wadowice ny 18 Mey 1920, ary nodimandry ny 2 Aprily 2005 tao Vatican, dia pretra poloney, eveka, arseveka, kardinaly izay voafidinny Fiangonana Katolika Romana ho papa ny 16 Oktobra 1978. Nifidy ny anarana Joany Pa ...
Dangun na Dangun Wanggeom dia ilay mpanorina malaza ary mpanjaka andriamanitry ny Gojoseon, fanjakana Koreana voalohany eo aminny misy ny faritany sinoani Liaoning, ankehitriny. Izy no lazaina fa "Zanaky ny lanitra" sady "Zanaka orsa" ary nanorin ...
Ny Garani Soarano dia gara iray any Antananarivo, izay nosokafana voalohany indrindra taminny taona 1910. Eo anivonny renivohitra Antananarivo no misy azy. Ny tomponio Gara io ankehitriny dia ny orinasa malagasy Madarail. Ao anatinio gara io dia ...
Katedraly Santa Laurent Ambohimanoro
Ny Katedraly Santa Laurent dia katedraly voalohany naorinny fiangonana anglikana ao Madagasikara. Ity trano fivavahana ity dia naorina teny aminny faritra avonAntananarivo, eo aminny ny havoana iray antsoina hoe Ambohimanoro, toerana akaiky ny ki ...
I Tsaralalana dia faritanàna iray ao avaratra andrefanny Gara Soarano, Ao Antananarivo. Ny faritanàna manodidina azy dia ny Cité 67 Ha, Ambondrona, La Cigale ary Antohomadinika.
Ny Valan-javaboarini Namoroka na fantatra koa aminny hoe Valan-javaboarinny Tsingini Namoroka, dia valan-javaboary malagasy anankiray hita ao avaratra andrefanny nosy Madagasikara, ao aminny faritanini Mahajanga, ary ao aminny Distrikani Soalala.
Radio Televiziona Analamanga
Ny RTA na Radio Télé Antananarivo dia fahitalavitra iray eto Madagasikara. Io fahitalavitra io no nanomana ny Pazzapa izay nivoahani Aina Cook, Firmin, Melky. mpihira malaza eto Madagasikara.
TV Plus Madagascar na koa TV Plus Madagasikara dia orinasa malagasy miasa aminny fandefasan-tsary aminny alalanny onja hertziana. I Nicolas Rabemananjara no talenio orinasa io. Ao Antananarivo ihany no na io "chaine" io eo aminny bandy UHF: CH20 ...
Ny LExpress de Madagascar dia orinasa mpamokatra gazety niorina taminny taona 1995. Isanny gazety vokariny ny: - LExpress de Madagascar: gazety an-tsoratra mpiseho isanandro aminny fiteny Malagasy sy Frantsay, - Ao Raha: gazety an-tsoratra mpiseh ...
Rajoelina Andry Andriamahazo Gilles Rajaonarimampianina Hery Ratsiraka Didier Ravalomanana Marc Tsiranana Philibert Ratsimandrava Richard Zafy Albert Biôgrafia Ratsirahonana Norbert Lala Gabriel Ramanantsoa
Mahafaly Solonandrasana Olivier, teraka taminny taona 21 Juin 1964 tao Nosy-Be Madagasikara. Izy no olo manga Malagasy ka voatendry lehibenny governemanta na ny Praiminisitra taminny faha 10 Aprily 2016. Izy no Praiminisitra faha telo taminny rep ...
Gabriel Ramanantsoa dia mpanao politika mizaka ny zom-pireneni Madagasikara teraka ny 13 Aprily 1906 tao Antananarivo ary maty ny 9 Mey 1978 tao Paris.
I Raveloharison Herilanto dia zandaromeria manam-boninahitra malagasy sady minisitry ny toe-karena sy ny teti-pivoarana nanomboka taminny volana aprily 2014 tao anatinny governemanta Kolo Roger.
I Tsiranana Philibert dia olom-pirenena malagasy. Filohani Madagasikara taminny 1 Mey 1959 hatraminny 11 Oktobra 1972 Teraka taminny taona 1912 tao Ambarikorano, Mandritsara ao aminny faritani Mahajanga. Nianatra tao aminny sekoly ambaratonga voa ...
I Albert-Camille Vital dia manamboninahitra ary mpanao politika malagasy, injeniera sivily niofana tany FRSS, ary praiminisitry ny Fitondrana Avonny Tetezamita taminny 10 Desambra 2009 hatraminny 29 Oktobra 2011.
I Zafy Albert, teraka taminny 1929 tany Ambilobe, dia mpanao politika filohani Madagasikara taminny 1993 hatraminny 1996.
Beihai dia tanàna any atsimonny faritany mizaka-tenani Guangxi any Sina. Izy dia faritany misy ny prefektiorany
Ny Central Park dia zaridaina manam-pivelarana 341 hektara ao aminny fokotani Manhattan any New York. Ny Central Park Conservancy manana tetibola 200 tapitrisa dollar no mitazona ilay park, ary voakojakoja tahaka ny zaridaina hafa misy any New Yo ...
Queens dia anisanny fokontany dimy ny tanànanny New York any Etazonia. Ao aminny kaontiani Queens, fizaranny faritani New York izy. 2 229 379 ny isanny olona tany Queens taminny 2000. Ilay fokontany dia norofonina taminny 1 Novambra 1683, nomena ...
Valan’aretina COVID-19 ao New York City
Valan’aretina COVID-19 ao New York City Ny tranga voalohan’ny valan’aretina COVID-19 dia voamarina tao New York City Etazonia tamin’ny Martsa 2020. Vehivavy iray avy any Iràna, firenena izay efa rakotr’ilay valan’aretina tamin’izany fotoana, tong ...
I Thomas Lincoln no rainy. Ny vadiny dia Mary Todd Lincoln. Ny zanany dia Robert Todd Lincoln, Edward Baker Lincoln, William Wallace Lincoln, Tad Lincoln. Ny rahalahiny sy/na ny rahavaviny dia Sarah Lincoln Grigsby, Thomas Lincoln, Jr.
Andrew Johnson dia mpanao politika mizaka ny zom-pireneni Etazonia teraka ny 29 Desambra 1808 tao Raleigh, North Carolina ary maty ny 31 Jolay 1875 tao Elizabethton, Tennessee